भरत गुरुङ्ग अत्याधिक सोझा थिए, ९ लाखको लागि उनकै गणको सेनाले गो,ली हा,नी ह,त्या गरे – Taja Khawar
भरत गुरुङ्ग अत्याधिक सोझा थिए, ९ लाखको लागि उनकै गणको सेनाले गो,ली हा,नी ह,त्या गरे
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ०९, २०७८ समय: १२:०६:१०
July 24, 2021 18
चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २१ बस्ने गंगाधर ढकालले ९ लाख पैसाको लागि भरत गुरुङ्गको गो, x ली हा, नी ह, x त्या गरेको खुलेको छ । प्रारम्भीक अ,नु,स,न्धानमा यस्तो निश्कर्ष आएको आज पत्रकार सम्मेलन गरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको हो । साउन ७ गते भरपुर महानगरपालिका वडा न १७ मानसिंह चोक नजिकै रहेको सिमडाँडा खेतको नहरमा टाउकोमा गो, x ली ला,गेको अवस्थामा भरतको मृ,त श,व फे,ला परेको थियो । साहि दिन साझ ५ बजे २६ वर्षीय ढकाललाई भरतपुर २० चनौलि बाट प्रहरीले प,क्रा,उ गरेको होे । पक्राउ पश्चात ढकालले गुरुङ्गलाई गो, x ली हा, x नी ह, x त्या गरेको स्वीकारेका छन् ।
मृ,तक गुरुङ्ग र निज ढकाल नेपाली सेनको एउटै गढ महेन्द्र गण दल राष्ट्रिय निकुञ्ज टोखामा कार्यरत रहेका थिए । मृतक धादिङ जिल्ला निरकण्ठ नगरपालिाका वडा नं. २३ का हुन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख ओम प्रकाश अधिकारीका अनुसार अभियुक्त ढकालले साउन ३ गते बैंक बाट मृतक गुरुङ्गको खातामा रहेको ९ लाख रुपैया झिकेका थिए । उहाँले भन्नुभयो, साउन २ गते काठमाण्डौ गएर उनको चेक लिई चितवन आएको, साउन ३ गते नवलपरासी गैंडाकोट गएर आईएमई बैंक बाट गैडाकोट गएर आफै साईन गरेर ९ लाख रुपैँया झिकेको देखिन्छ । त्यसमध्य एक लाख आफुले राखे । बाकि ८ लाख लामो समय काम गरेको परिवारलाई केहि दिन नसकेको, केहि जोगाएको पैसा भन्दै श्रीमतिलाई ६ लाख र बुबालाई २ लाख दिएका थिए ।” मृ,तकको हस्ताक्ष्यर सरल र न,क्कल गर्न सजिलो भएकाले अ,भि,यु,क्त ढकालले सजिलै बैंक बाट रकम निकालन सफल भएको प्रहरी प्रमुख अधिकारीको भनाई छ ।
यहि अवधिमा मृ,तक भरत गुरुङ जग्गा पासका लागि चितवन आउनुपर्ने हुदा साउन ५ गते गंगाधर फेरि उनलाई लिन आफ्नो मोटरसाइकल सहित काठमाण्डौ गएका थिए । फर्कदा कुनै होटलमा बास बसे । ६ गते चितवन सारदा नगर स्थित मृ,तकको माइलो बुबाको छोरा रविन गुरुङको घरमा ब्याग राखेर दुई जना बाहिर निस्कीय । सोहि दिन रातीको समयमा गंगाधरले मृ,त,क भरतलाई खाना र खाजा खाने बहानामा अ,त्या,धिक मात्रामा मा, x ध, क प,दा,र्थ से, x व,न गराएको थिए । भरतपुरको विभिन्न स्थानमा मोटरसाइकलमा राखि रात भरि घुमाएको प्रहरी प्रमुख ओम प्रकास अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ढकालले चालाखि गर्दे राती को संग थियो भन्ने थाहा नहोस भन्ने हेतुले रातभरी डुलाएको देखिन्छ । अ,त्या,धिक मा, x द,क प,दा,र्थ से,व,न गरेका गुरुङ्गलाई पिसाब फेर्ने निउमा झरी गो, x ली हा, x नी ह, x त्या गरेको उहाँको भनाई छ ।
त्यसपछि सौराहा चोक स्थीत आफ्नो फुपुको घर आई मोटरसाइकल आफुले लगाएको कपडा जुत्ता पखालेको । मृतक भरत गुरुङ्गको लागि खरिद गरेको जुत्ता लगाएको उहाँले बताउनुभयो । झिकेको पैसाबाट ढकालले दुवै जनाको लागि २ जोडि जुत्ता खरित गरेका थिए ।
सोहि मितिमा मोटरसाइकल आफ्नो भाइपर्ने होण्डाई कार शोरुममा छोडी भाईकै मोटरसाइकल लिएर हिडेका थिए । अ,प,रा,धमा ढकालले अटोम्याटीक आधुनिक एसएनजी १००७९२ नम्बरको ह,ति,या,र प्रयोग गरेका छन् । ढकालको व्यान अनुसार अ,नु,स,न्धानको क्रममा प्रहरीले सो ह,ति,या,र भरतपुर ८ विसहजारी जाने बाटोमा पर्ने प्रखालको पछाडी झाडीमा फा,लेको अवस्थामा फे,ला पारेको हो । घटना स्थलबाट गो, x लिको खो, x का एक थान, एसएनजी ह, ति,या,र एक थान, उनको दिदिको घरबाट ७ राउड गो, x लि, ८ लाख नगद, मोटर साइकल, एसएनजी राख्ने झोला, ह, x त्याको समयमा लगाएको जुत्ता एक जोर, प्रहरीले बरामत गरेको छ । उनलाई ज,न्म कै,द समेत हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै प्रमुख अधिकारीले मृ,त,क एकदमै सोझो र मा,x ध,क प,दा,र्थ अ, x त्या,धिक से, x व, न गर्ने हुनाले यस्तो हुन गएको बताउनुभयो ।
Last Updated on: July 24th, 2021 at 12:06 pm